July 20, 2019 - ThutaSone
ကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်သူ မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်မိန့်ချလိုက်ပြီ….
July 20, 2019 ThutaSone 0
ကျောင်းသူလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်သူ မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်မိန့်ချလိုက်ပြီ…. မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်မိန့်ချလိုက်ပြီ။ကျိုင်းတုံတွင် ဆယ်တန်းကျောင်းသူကို အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ပြီး အလောင်းကိုမီးရှို့ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည့် စိုးလွင် (၄၀ နှစ်) နှင့် စိုင်းရှဲန် (၂၉ နှစ်) ကို မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ယနေ့ […]
အမှတ်မထင်ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှ ပန်ဆုံခဲ့ကြတဲ့ တချိန်က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားမင်းသမီးတွေလို့ ဆိုရမယ့် လွင်မိုးနဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်တဲ့။ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတဲ့အပြင် ယခုအချိန်မှာလည်း မိသားစုဘဝလေးတွေကို ကိုယ်စီတည်ဆောက်ထားနိုင်ကြပြီဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးနဲ့နန္ဒာလှိုင်တို့ကတော့ တချိန်တုန်းက လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ […]
နာမည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကားအာဇာနည်ကုန်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထား နာမည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ City Hunter ကို ကိုရီးယားဒရမ်မာကြိုက်ပရိသတ်တိုင်းနီးပါး ကြည့်ရှုခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Lee Min Ho နဲ့ Park Min Young တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာသာမက နိုင်ငံတကာမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ […]
အသက်​ ၂၈ နှစ်​ရှိသူအမျိုးသားက အသက်​ ၇ နှစ်​​မပြည်​့သေးသည်​့ခလေးငယ်​အား မဖွယ်​မရာပြုလုပ်​…. အသက်​ ၂၈ နှစ်​ရှိသူအမျိုးသားက အသက်​ ၇ နှစ်​နှစ်​မပြည်​့သေးသည်​့ခလေးငယ်​အား မဖွယ်​မရာပြုလုပ်​….မိုးကောင်း၌ အသက်ခုနစ်နှစ်ခန့်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အမှုဖွင့်အရေးယူ….ဇူလိုင် ၂၀ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့၌ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းက […]
မောင်ဥုးပ ဉ္ဇင်းနေဖို့ ကျောင်းမရှိလို့ အဖွားရဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုရောင်းပြီးလှူမယ်ဆိုတဲ့ အသက် ၈ဝကျော်အဖွား…. အင်းစိန်က သိက္ခာထပ်ထားတဲ့ ရဟန်းဒါယိကမကြီး ဒေါ်စောနွဲ့က တိုးတိုးလေးကပ်ပြီး ပြောပါတယ်။ မောင်ပဥ္ဇင်း အဖွားလည်းအသက်၈ဝကျော်ပြီ….အဖွားရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကျရင် လာဖြစ်အောင် လာနော် ဆိုတော့ လာမှာပေါ့ လို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဖွားက ဆက်ပြောတယ်….မောင်ပ ဉ္ဇင်းနေဖို့ ကျောင်းမရှိလို့ […]
လျှပ်စစ်/စွမ်းအင်ဌာနကို အဂတိကော်မရှင်စစ်ဆေး၊ ဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီးတို့၏ ငွေစာရင်းများလည်း ပါဝင် နေပြည်တော်(ဇူလိုင် ၂ဝရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်)။ ။ နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး အပါအဝင် ၎င်းတို့ ဇနီးများ၏ ငွေစာရင်းများကိုပါ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း […]
မန္တလေးမြို့ ဧရာဝတီမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်ထက် (၆) လက်မကျော်မြင့်တက်၊ ရေဘေးကယ်ဆင်ရေး အသင့်ပြင်ထား ဇူလိုင်-၂၀ မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး ဇူလိုင်(၂၀)ရက် နေ့လည်ပိုင်းအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် (၁၆)စင်တီမီတာ (၆လက်မကျော်)အထိ ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမူ ဦးစီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်နေရာ […]
သားဦးလေးကို နာမည်မပေးရသေးဘူးဆိုတဲ့ အောင်သူ… မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုးအိအိခန့်တို့ စုံတွဲလေးကတော ့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးက နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် […]
ကျေက်ကပ်ရောဂါအကြောင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ သို ့သော် တချို ့ဝေဒနာသည်တော်တော်များများမှာ ရောဂါအခြေ အနေဆိုးရွားနေတာတောင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေကြောင်းကို သိသာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေ မတွေ ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ထို ရောဂါကို တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမားလို ့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောင်းစွာ အသက်ဆက်နိုင်ဖို ့အတွက် ကျောက်ကပ် ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလွန်စွာ အရေးပါလှပါတယ်။ […]
ကလေးတွေကို ခမည်းကြိုးတွေ ဆွဲပေးတတ်သူများ သတိထား (အခုလို ဖြစ်သွားရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ) လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်က ဆေးခန်းကို အဖျားမကျလို့ဆိုပြီး လသားလေးတစ်ယောက်ကို လာပြတယ်။ အဖျားတအားကြီး တော့ဆေးရုံတင် အဖျားမကျတဲ့ အကြောင်း source of infection ကိုလိုက်ရှာတော့ ကလေး လည်ပင်း ဝလို့ […]